Boliiska Soomaaliya oo Ka hadlay geber La kufsaday lana dilay.
Boliiska Soomaaliya ayaa ka hadlay geber shalay Lagu Kufsaday Muqdisho, waxuuna Boliiska uu soo saaray Qoraal.
Hoos ka akhriso Qoraalka Boliiska.
Ugu dambeyn Waxaan Ummadda Soomaaliyeed, u cadeynaynaa in ay socoto baaristu dhawaana aan natiijada la wadaagidoonno, qof kasta oo ay ku cadaatana aan Cadaalada horleenidoonno, hadii alle idmo.
« Mid ka mid ah Gabdhihii imtixaanka Dowladda ku baasay oo Kufsi wadareed iyo dil la isugu daray
Xasan Cali Khayre oo Shaaciyay inuu yahay Musharax utaagan xilka Madaxweynaha. »